विविध – Page2– Fewa Times
यस्ता व्यक्तिको घरमा कहिलै धनको बास हुँदैन
हिन्दू शास्त्र अनुसार समुन्द्र मन्थन भन्दा पहिला स्वर्गका देवताहरु निर्धन भएका थिए । देवराज इन्द्रले लक्ष्मीको स्तुति गरेपछि धनकी देवी लक्ष्मी खुशी भएर इन्द्रलाई द्धादशाक्षर मन्त्र दिनको तीनपल्ट पाठ गर्न सुझाएका थिए। विष्णुपुराणमा इन्द्रले धनकी देवी लक्ष्मीको स्तुति गरेका थिए। देवराज इन्द्रको......
विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
ज्योतिष शास्त्रमा जन्मबार अनुसार पनि मानिसको भाग्यमा असर गर्ने बताइन्छ । जन्म समय अनुसार नै मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा फलादेश गरिन्छ । आज विहीबार, विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ रु भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । विहीबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र समझदार हुने......
आज बिहीबार यी देवताहरुको पुजा गर्नुहोस्, मनोकांक्षा पुरा हुनुको साथै धनको बर्षा हुनेछ
हरेक बार मानिसहरुले विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा अर्चना गर्ने गर्छन् । बार अनुसार नै भगवानको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । बिहीबार देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको लागि समर्पित छ । यो दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने......
असार ७ गते ३ घण्टा लामो सूर्य ग्रहण, यी ८ राशिलाई एकदमै राम्रो
काठमाडौँ - २०७७ सालको पहिलो सूर्य ग्रहण असार ७ गते आइतबार लाग्दैछ । नेपालमा बिहान १० बजेर ५५ मिनेटबाट सुरु हुने सूर्यग्रहण अपरान्ह दुई बजेर २४ मिनेटमा समाप्त हुने छ । मध्याह्न १२ बजेर ४१ मिनेट जाँदा काठमाडौँबाट सूर्य करिब ८८ प्रतिशत ढाकिएको देख्न सकिनेछ। उक्त समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चिसो अनुभव......
चिनीले लाग्छन् यस्ता घातक रोग
चिनीले मधुमेह रोग मात्र निम्त्याउँछ भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने एकपटक राम्रोसँग सोच्नुहोस् । तपाईलाईमधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयघात आदि समस्या छैन भने त्यो पक्कै पनि सुखद समाचार हो । तर, आफू स्वस्थ छु भन्दैमा कुनै पनि प्रकारको गुलियो खानेकुरा खाने अनुमति छैन है । दैनिक जीवनमा चिनीको प्रयोग गरिरहेका......
प्रवेशद्वारमा कागती र खुर्सानी झुन्ड्याउदा के हुन्छ ? थाहापाउनुस्
सामाजिक तथा धार्मिक रुपमा चलेका अधिकाशं परम्पराहरु अझै पनि नेपाली समाजमा चलिरहेको पाइन्छ । कतिपय मानिसले ति परम्परा र मान्यताको पछाडी कुनै तुक नभएको भन्दै विरोध गरे पनि अझै हाम्रो समाजमा कायमै छ । कतिपय हामीले नबुझेर पनि ति मान्यताको अनुशरण गर्छौं भने कतिले त्यसलाई रुढिवादी परम्परा मान्दछन्......
तपाई थाहा नहुन पनि सक्छ चियाका यति धेरै फाइदाहरु !
चाहे मौसम जुन सुकै होस्, चिया प्रायः ले रुचाउने पेय पदार्थ बनेको छ । गर्मीमा कसैले आइस मिसाएर पनि पिउने गरेका छन् । चियाले मुडलाई फ्रेस बनाउने मात्रै होइन यसका स्वास्थ्य फाइदा पनि छन् । दिनको एक वा दुई कप चियाले स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा गर्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले नै पुष्टि गरेका छन् । चियाले दाँत......
यसकारण यी व्यक्तिलाई बढि टोक्छ लामखुट्टेले !
मदिरा पिउनेहरुलाई लामखुट्टेले बढी टोक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकाको जर्नल अफ मस्किवटो कन्ट्रोल एसोसिएशनको रिपोर्टका अनुसार रक्सी नपिउनेहरुभन्दा पिउनेहरुलाई लामखुट्टेले बढी टोक्छन् । यद्यपि रक्सी पिउनेहरुप्रति नै लामखुट्टे बढी आकर्षित किन हुन्छन् भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । लामखुट्टेले......
भुलेर पनि यी तीन राशिले नलगाउनुहोस् सुन !नत्र …
काठमाडौं- विश्वबजारमा सुनको मुल्य दिनानुदिन बढेको बढयै छ । तरपनि सबै वर्गका व्यक्तिहरुले सुनका गहना लगाउने रहर हुन्छ । हुनपनि हो सुनका गहना मन नपराउने को छन् र ? सुनको आफ्नै महत्व छ । धार्मिकशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र अनुसार पनि सुनका गहना अत्यन्तै शुभ मानिन्छ । पृथ्वीमा रहेका मध्ये बहुमुल्य धातुको......
पुरुषले थाहानपाउने महिलाका यी गोप्यकुराहरु
पुरुषका बारेमा महिलाई प्रायः सबैकुरा थाहा हुन्छ । मानव सृष्टिको रचनाकार नै महिला भएकाले पुरुषको बारेमा थाहा नहुँने त कुरै भएन । तर महिलाका बारेमा कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जुन पुरुषले कहिल्यै पनि थाहा पाउन सक्दैनन् । के हुन् त त्यस्ता कुरा ? जुन महिलाले लुकाएर राखेका हुन्छन् र पुरुषले थाहा पाउन......
आज १६ सय जनाले जिते कोरोना
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमणमुक्त भई घर फर्किनेको सङ्ख्या एक हजार ७०५ रहेको छ । निको......